Vine ve ilay diamondra eo amin'ny sehatry ny varotra sosialy? | Martech Zone
Talata, Jona 9, 2015 Alatsinainy, 8 Jona, 2015 Douglas Karr
Raha mbola tany amin'ny IRCE, Faly be aho rehefa nanakana ahy ny mpandahateny iray, Danny Gavin ary nilaza tamiko fa nahita ahy niteny nandritra ny taona maro lasa tamina hetsika iray tany Austin. Danny dia iray amin'ireo mpivarotra an-tserasera… manangana hetsi-panentanana amin'ny Internet sy haino aman-jery sosialy Brian Gavin Diamonds. Miaraka amin'ny fahaizany dia nanampy tamin'ny fampiroboroboana ny BGD ho eo amin'ny laharan'ny orinasa mpivarotra e-varotra Internet haingana indrindra 1000 sy 50 izy.
Hizara ny sasany amin'ireo zava-mahatalanjona izahay BGD Vine tadivavarana manerana an'ity lahatsoratra ity avy amin'i Brian Gavin Diamonds, hametrahana sary vitsivitsy amin'ny fomba nanararaotany ny sehatra.
Avy amin'ny Idea ka hatramin'ny Design
Nanontany an'i Danny aho hoe maninona no eo izy ary nilaza tamiko izy fa miresaka momba ny fahombiazana tsy manam-paharoa nananan'ny BGD Vine. Ary tsy miresaka isa vitsivitsy eto isika:
Amin'ny fampiasana influencer Vine, ny BGD dia nahatratra 6 tapitrisa tadivavarana tao amin'ny Vine (izay olona 2 tapitrisa eo ho eo) ary maherin'ny 445 ny fizarana tao amin'ny Twitter.
Nahazo fankasitrahana avo lenta tamin'ny fanontana marobe ny fampielezan-kevitr'izy ireo Vine, ary laharana faha-2 ihany tao aorian'i Tiffany ho an'ny fampielezana dokambarotra fivarotana firavaka amin'ny taona 2014 (JCK).
Na eo aza ny fihenan'ny varotra mpifaninana eo amin'ny Black Friday sy Christmas, ny BGD dia nahazo fitomboana 45% YOY fitomboana ary koa ny fitomboan'ny 13% YOY tamin'ny Q1 tamin'ny 2015.
Ny BGD dia nahita fiakarana 20% mihombo ihany koa amin'ny fifamoivoizana mivantana mankany amin'ny tranokala nanomboka ny tapany voalohan'ny taona 2014.
Tsy asa tsotra io raha ny fifaninanana mahery setra amin'ity orinasa ity. Brian Gavin Diamonds dia mpanefy vola manokana sy mpivarotra e-tailer famatsiam-bola tokana izay ezahina hampitombo ny fahatsiarovan-tena amin'ny Internet rehefa mifaninana amin'ny tetibola be an'ny mpifaninana aminy.
Ny fanamby dia ny hoe mila mitady fomba mahomby ny BGD hifaninanana amin'ireo mpifaninana an-tserasera sy eo an-toerana amin'ny alàlan'ny fampiasana media sosialy izay hametraka ny maha-izy azy ny marika hampitombo ny fifamoivoizana an-tranonkala sy hampitombo ny varotra.
Ny paikadin'i Danny dia ny famoronana tetiandro famoahana malefaka mamela ny BGD hampiasa vola amin'ny hetsika ara-potoana sy mifandraika amin'ny alàlan'ny famoahana horonantsary isan-kerinandro izay mampiala voly sy mahatalanjona amin'ny sehatra azo zaraina.
Namolavola foto-kevitra manodidina ny kalandrien'ny famoahan-kevitray izy ireo, namokatra ny atiny horonantsary, ary nanandratra izany tamin'ny alàlan'ny fantsona media sosialy ary koa tamin'ny influencer Vine izay notratrarin'izy ireo.
Ny tonony sy ny fomba nanatontosana ilay hafatra mamorona dia ny fampifanarahana ny fisianay amin'ny Internet miaraka amin'ny endrika kanto sy fanavaozana ivelan'ny Internet. Raha te hifaninana amin'ireo mpifaninana amin'ny teti-bola avo lenta dia mila misafidy fitaovana iray izay misy ny mpihaino kendrena azy ireo (18-44), fa any amin'izay tsy misy ny mpifaninana aminay.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana Vine, ny BGD dia tsy vitan'ny hoe niditra an-tsehatra tamin'ny mpihaino tanora (18-20) teo amin'ny lampihazo ihany, fa koa ny mpijery Twitter (18-49) noho ny fizarana avo lenta sy fampidirana ireo sehatra roa. Mazava, mahaliana ary tsy manam-paharoa ny atiny, saingy mandeha haingana mba hitaky ny hijeren'ilay mpijery azy indray.
Ny 4 Jolay
Ireo karazan-dahatsary ireo dia mifandray amin'ny taranaka mandehandeha (izay mitodika any amin'ny demografika be taona kokoa) ary fohy loatra hanelingelina sy hampianatra nefa tsy handany fotoana amin'ny mpijery. Ity fomba fiasa sy feo ity dia nahomby tamin'ny fitaterana ny fifamoivoizana tamin'ny tranokala ary koa ny fivarotana fiara.
Mampifanaraka ny kintana
Misaotra manokana an'i Danny tamin'ny nanampiany ahy hametraka ity lahatsoratra ity! Aza hadino ny mitsidika Brian Gavin Diamonds ho an'ny firavakao manokana!
Tags: brian gavin diamondratranga fianaranadanny gavinvarotra sosialyecommerce ara-tsosialyvoalobokafampielezana voalobokafandalinana tranga ny voalobokavarotra voalobokavoaloboka voalobokavokatry ny voaloboka
Playbook Digital Sales & The New Era of Selling